Iikholeji zeBhayibhile eziPhezulu eziQinisekisiweyo ze-Intanethi kunye neeNkcukacha zabo zoKwamkelwa 2022
Iikholeji zeBhayibhile ezikwi-Intanethi eziPhantsi eziPhambili eziPhantsi ezifumana iiNkcukacha zoKwamkelwa
Kule nqaku, sidwelise inani leendleko eziphantsi ezivunyiweyo kwiikholeji zebhayibhile ezikwi-intanethi ezinikezela ngeedigri kunye nokubonelela ngeenkqubo zesatifikethi sebhayibhile ezikwi-Intanethi kunye nezifundo kubafundi bamanye amazwe abavela kuwo onke amazwe ehlabathi.
Ungayazi okanye ungazi oku, kukho iikholeji zebhayibhile ezivunyiweyo ezikwi-intanethi ezinexabiso eliphantsi lokufumana iifizi zokufunda apho ungathatha khona iinkqubo zesidanga kwaye ufumane isidanga esiqinisekisiweyo, isidanga senkosi, okanye isidanga sobugqirha.
Emva kokufumana izicelo ezininzi ezivela kubafundi bethu apha, sigqibe kwelokuba siphume siye kukhangela ezi kholeji zebhayibhile zikwi-Intanethi ezingafikelelekiyo kuphela kodwa ezivunyiweyo zokubonelela ngeenkqubo zokuqinisekisa.
1 Iindleko eziphantsi eziqinisekisiweyo kwiikholeji zeBhayibhile ezikwi-Intanethi
1.1 IYunivesithi yaseLuther Rice kunye neSeminary
1.2 IYunivesithi yasePiedmont yeYunivesithi
1.3 ISpex School of Theology
1.4 Ikholeji yaseGrace kunye neTheological Seminary
1.5 I-Lexington Ithiyori yeTheology
1.6 KwiYunivesithi yaseNorthville
Iindleko eziphantsi eziqinisekisiweyo kwiikholeji zeBhayibhile ezikwi-Intanethi
Ezi zilandelayo iiyunivesithi ezibonelela ngedigri ye-intanethi ebiza kakhulu;
IYunivesithi yaseLuther Rice kunye neSeminary
IYunivesithi yasePiedmont yeYunivesithi
ISpex School of Theology
Ikholeji yaseGrace kunye neTheological Seminary
I-Lexington Ithiyori yeTheology
IYunivesithi yaseLuther Rice kunye neSeminary lixabiso eliphantsi kwiikholeji zebhayibhile ezikwi-Intanethi ezibonelela ngesidanga se-Doctor of Ministry kwi-Intanethi ngexabiso eliphantsi le- $ 316 ngeyure nganye yokuthenga ngetyala.
Inkqubo inikezelwa nge-100% kwi-intanethi kwaye ifuna abafaki-zicelo ukuba babe ne-GPA ye-3.0 kunye nephepha le-10-15 lephepha lokwamkelwa.
Ngelixa ungafunda ngokupheleleyo kwi-Intanethi kwaye ufumane isatifikethi sakho sedigri kwiYunivesithi yaseLuther Rice nase Seminary, unokuthatha isigqibo sokudityaniswa kweeklasi ezikwi-Intanethi nakwi-campus ukuba ukwiMetro Atlanta.
Into emangazayo ngesi sikolo kukuba isicelo sokwamkelwa sivulekile phantse unyaka wonke oko kuthetha ukuba unokufaka isicelo sokuqala inkqubo yesidanga phantse nangaliphi na ixesha nangona kungafuneka ulinde ixesha elithile ukuqala iiklasi kodwa oko kusemva kokuba ubufanele ukuba yamkelwe.
Isikolo sinikezela nge-bachelor yeedigri zobugcisa, isidanga sobugcisa, i-MDiv kunye neDigri yeDigri yoMphathiswa.
IYunivesithi yasePiedmont yaMazwe ngaMazwe ngoku eyaziwa ngokuba yiYunivesithi yaseCarolina yenye yezona zifundo zinexabiso eliphantsi ezamkelweyo kwiikholeji zebhayibhile ezikwi-intanethi eWinston-Salem, eMantla Carolina.
Le yunivesithi yanamhlanje yaseMelika ebonelela ngeedigri zobulungiseleli kwi-Intanethi ngeenkqubo ze-bachelor's, zenkosi, kunye nezobugqirha.
Iinkqubo zibonelelwa ngokupheleleyo kwi-Intanethi kwaye ekugqibeleni, abafundi banikwa izatifikethi zabo.
I-Apex School of Theology yenye yezona ndleko ziphantsi zeekholeji zebhayibhile ezivunyiweyo ezibonelela ngothotho lweenkqubo zesidanga kwizifundo zebhayibhile, ukululekwa kobuKristu, kunye nobunkokeli.
Iidigri ezibonelelweyo zizidanga, iinkosi, kunye nodokotela ezinikezelwa ngokupheleleyo kwi-Intanethi ngexabiso eliphantsi.
Ikholeji yaseGrace kunye neTheological Seminary yenye yexabiso eliphantsi kwiikholeji zebhayibhile ezivunyiweyo ze-Intanethi ezibonelela nge-100% kwimfundo enexabiso eliphantsi kwi-Intanethi kwizifundo zobufundisi ezibonelela ngeenkqubo zesidanga sokuqala kunye nesidanga.
Isikolo, asiboneleli kuphela ngeedigri ezikwi-intanethi kunye neenkqubo njengoko sinendawo yayo ese-Indiana apho abafundi baphekelwa khona ngokugqibeleleyo kwinkolo yobuKristu.
Ngaphezulu kwe-1,200 ekhampasi yabafundi, iGrace ikholeji yenye yezona kholeji zebhayibhile zivunyiweyo zibonelela ngeekhampasi kunye nakwiinkqubo zekampasi ezisemgangathweni kunye nezesitifiketi.
Isemina ikwabonelela ngoGqirha we-Intanethi kwi-Ofisi eyi-30 isidanga seyure kunye neerhafu ezingama-400 ngeyure nganye. Ezinye iinkqubo zitshiphu ngokulinganayo.
Le seminari yenye yeekholeji zebhayibhile ezivunyiweyo ezisezantsi ezinikezela ngeedigri zobulungiseleli ezingabizi kakhulu kubafundi abavela kwihlabathi liphela abanomdla wokulandela naziphi na iinkqubo zakhe ezikwi-Intanethi.
I-Lexington Theological Seminary inikezela ngeedigri ezahlukeneyo zobufundisi kunye nobulungiseleli kwizidanga zokuqala kunye nenqanaba lokufunda.
Into emangazayo ngesi sikolo yindlela enikezela ngayo izifundiswa ezithile kubo bonke abafundi abamkelweyo kuyo nayiphi na inkqubo yeedigri. Isikolo sikwabonisa nokwamkelwa qho ngenyanga njengoko ifestile yesicelo ihlala ivulekile kwaye abafundi banokufaka isicelo ngalo naliphi na ixesha kwaye baqiniseke ukuba bafumana ingxelo efanelekileyo kwisimo sabo sokwamkelwa.
Isikolo sikwabonelela ngeeklasi zekhampasi eziyindlela yayo ephambili yokufundisa.
Eli ziko libonelela ngoGqirha kwi-Intanethi yoMphathiswa i-32 isidanga semali ethatha iminyaka emithathu ukugqiba kwaye ahlawulise i-395 yeyunithi yeyunithi yokufundisa yenkqubo.
IYunivesithi yaseNyakatho yeGreenville ithathwa njengeyona kholeji iphantsi yexabiso eliphantsi eyamkelweyo kwibhayibhile ekwi-intanethi yabafundi bamazwe aphesheya abafundisa i-bachelors, masters kunye needigri zobugqirha kwi-Intanethi nangaphandle kwabo bonke abafundi.
Apha, ukwamkelwa kuvuliwe unyaka wonke kwiinkqubo zesidanga sokuqala kunye nesidanga sokuqala kwaye abafundi banokufaka isicelo ngalo naliphi na ixesha abalithandayo.
Kukho iimfuno zokwamkelwa ezahlukeneyo zeenkqubo ezahlukeneyo ezibonelelwa sisikolo kwaye nganye yezi nkqubo zinje ngeenkqubo zesidanga sokuqala, iinkqubo zokuthweswa izidanga, imfundo yabadala kwi-intanethi kunye nesidanga sokuqala iinkqubo baneemfuno zabo ezizodwa ezidweliswe kanye kwi iphepha lokwamkelwa.
Iprojekthi yokugqibela kule nkqubo ibandakanya umba weKhomishini eNkulu evavanywe kubulungiseleli bakho.
Ngelishwa, azikho ezininzi zeendleko eziphantsi ezivunyiweyo kwiikholeji zebhayibhile ezikwi-Intanethi nakwiiyunivesithi ezibonelela ngenkonzo ye-Intanethi enexabiso eliphantsi kunye needigri zesemina, kodwa ke ezi zidweliswe apha ziya kuba luncedo kuwe.
Ukongeza, kukho ezininzi iinkqubo zasimahla zesidanga kwi-intanethi ungathatha inxaxheba kwaye kukwakho nenani leefayile ze- Iikholeji zebhayibhile ezinikezela ngemfundo yasimahla kwi-Intanethi kunye nezatifikethi nawe ungazibandakanya.
Ukuqukumbela, ezi yunivesithi zidweliswe apha ziya kukunceda ufezekise amaphupha akho obulungiseleli ukusuka kwintuthuzelo yekhaya lakho ngokufunda izinto kwi-Intanethi kwaye ziyafikeleleka ngokulinganayo ngeedigital-friendly degree kunye neenkqubo zesatifikethi.
Ekupheleni kwenkqubo yakho, unikwa isatifikethi sedigri esinyanisekileyo njengoko samkelwe njengesiqhelo esivela kwiziko eliqhelekileyo ekhampasini.
Iinkqubo zaSimahla zeMasters kwi-Intanethi zaBafundi beZizwe
Iikhosi ze-100 zasimahla ezikwi-Intanethi ezivela kwiiyunivesithi zaseCanada
Iikhosi zasimahla zoLawulo lweProjekthi kwi-Intanethi zaBafundi beZizwe
IziFundo ezisisiseko Kwelinye ilizwe iimfuno zaBafundi beZizwe ngezizwe
Iimfuneko zokungeniswa kweDalhousie University Canada, iinkqubo, iifizi kunye nezifundo
Okulandelayo Post:Uluhlu lweeNyuvesi zeNkohliso eMelika, e-UK, e-India, eNigeria, nase-Rajasthan
Pingback: -IiNkonzo zokuFunda kwi-Intanethi
Pingback: I-15 iiyunivesithi zamaKristu eziphezulu kwi-USA 2021